Waa kuma Ninka haya ‘Furaha Kacbada’ ee uu qoyskiisa ku wareejiyay Nebi Muxammed NNKH? | HalQaran.com
Waa kuma Ninka haya ‘Furaha Kacbada’ ee uu qoyskiisa ku wareejiyay Nebi Muxammed NNKH?
Makkah (Halqaran.com) – Sheikh Saleh Al Shaiba waa qofkii 108-aad iyo tafiirtii Cuthmaan ibn Talxa (RC) oo Nebi Muxamed NNKH uu dhiibay furaha Kacbada una ballan qaaday ilaalinta kacbada qarniyaha soo socda, Sida lagu baahiyay bogga rasmiga ee Xaramayn Shariifayn.
Al-Shaibi waxa uu ku dhashay magaalada Makkah, waxa uuna shahaadada doctorate ka qaatay culuunta Islaamka. Waxa u horay u soo noqday bare jaamacadeed, waxaanu soo saaray buugaag badan oo ka hadlaya diinta iyo taariikhda Islaamka.
Sheekh Salah Al Shaiba / HARAMAIN SHARIFAIN
Saleh Al-Shaibi waxa uu noqday sii hayaha furaha Kacbada sanndkii 2013 ka dib markii adeerkiis Abdulqader Taha Al-Shaibi uu geeriyooday.
Muqaal laga soo duubay sheekh Saleh al-Shaiba ayaa lagu soo bandhigay furayaasha Kacbada, ee albaabka Tawba ee sahlaya in la galo saqafka Kacbada iyo Maqam Ibraahim.
Waxa uu sheegay in furaha uu ka samaysan yahay bir, dhererkiisuna yahay 35 sentimitir. Waa la beddelay oo la casireeyay dhawr jeer qarniyadii la soo dhafay oo dhan. Maanta furaha iyo qufulka Kacbada waxaa laga sameeyay nikkel oo lagu dhejiyay dahab 18-carat ah halka Kiswah-da gudaha ama gogosha Kacbada ay tahay cagaar.
Al-Zulfah wuxuu sheegay in qaabka furaha la bed-bedelo had iyo jeer. Dalka Turkiga waxa ku yaala madxaf ay yaallaan 48 furo oo kacbada lagu furi jiray laga soo bilaabo dawladii Cusmaaniyiinta, halka Sucuudiga ay yaalaan laba nuqul oo furahaasi ah oo ka samaysan dahab saafi ah.
Furaha Kacbada / HARAMAIN SHARIFAIN
Furaha Kacbada Barakeysan ayaa ah mid ay gacanta ku hayaan dad gaar ah oo uu Nabi Muxamed NNKHA u dhiibay, waxaana loo yaqaanaa dadkaasi gacanta ku haya furaha Kacbada Sudnat Al-Kacba.
Sudnat Al Kacba waa Qoys uu Nabi Muxamed NNKHA u dhiibay Furaha Kacbada waxaana qoyskaasi ay ka soo jeedaan Banu Shayba, furaha kacbada ayaa waxay gacanta ku hayaan muddo 16 qarni ah.Reer Banu Shayba oo haatan loo yaqaano Aal-Shayba ayaa waxay tafiir ahaan ka soo jeedaan Qusay Bin Kilaab Bib Murra, Qoyskii Qusay Bin Kilaab ayaa gacanta ku hayn jiray Furaha Kacbada Islaamka ka hor.
Al-Zulfah oo ku takhasusay taariikhda Islaamka, wuxuu sheegay in qaabka furaha uu is bedledelo. “Madxaf ku yaalla Turkiga waxaa yaallo 48 fure oo la uruurinayay tan iyo boqortooyadii Cusmaaniyiinta, halka Sacuudiga uu hayo Laba fure oo koobi ah oo dahab laga sameeyay.Qoyskaasi ayaa sidoo kale had iyo jeer ka shaqeeya nadiifinta Kacbada waxaana kacbada la nadiifiyaa laba jeer sanadkii, waxayna labadaasi jeer kala yihiin kowda Bisha Shacbaan iyo 15ka bisha Muxaram.
@HalQaran News Desk
Furaha Kacbada barakeysan
Sheikh Saleh Al Shaiba